Qirashadii Layaabka Lahayd Ee Zidane: “Waxaan Ka Baqayaa In Carruurtaydu Noqdaan Doqomo Yaryar” - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Qirashadii Layaabka Lahayd Ee Zidane: “Waxaan Ka Baqayaa In Carruurtaydu Noqdaan Doqomo...
Qirashadii Layaabka Lahayd Ee Zidane: “Waxaan Ka Baqayaa In Carruurtaydu Noqdaan Doqomo Yaryar”
Wariyaha Faransiiska ah ee Frederic Hermel, waxa uu waqti badan la qaatay Zinedine Zidane, waxaanu ka hayaa qisooyin badan oo noloshiisa gaarka ah, ciyaaraha iyo qoyskiisaba ku saabsan.
Hermel wuxuu la socday tallaabo kasta oo uu Zidane qaaday tan iyo markii uu Real Madrid usoo wareegay sannadkii 2001, haddana wuxuu qorayaa buug ku saabsan tababare Zinedine Zidane.
Qayb ka mid buuggan, waxa uu wariye Hermel kusoo gudbiyey sheekooyin uu Zidane uga warramay oo dunida kalena layaab ku ridaya, taas oo dhacday xilli ay diyaarad wada raaceen iyadoo uu wehelinayo halyeygii hore ee Real Madrid ee geeriyooday ee Di Stefano.
Zidane waxa uu u caddeeyey wariyaha arrinta kaliya ee cabsida ku haysa noloshiisa, waana sida ay noqon doonaan ubadkiisu.
“Hal qiso ayuu ii sheegay mar aan la soconay diyaarad iyadoo uu na wehelinayey Alfredo Di Stefano iyo Zidane, waxayna ahayd kaddib munaasibaddii Ballon d’or. Zidane wuu iga yaabiyey. Waxa aanu ka wada hadalnay nolosha, waxaanu igu yidhi: ‘waxaan qabaa hal cabsi ah… in carruurtaydu ay noqdaan doqomo yaryar’.” Ayuu Hermel ku qoray qayb ka mid ah buuggiisa.
Maadaama uu Zidane ahaa ciyaartoy caan ah iyo tababare uu markii dambe isku beddelay, noloshiisana uu ku qaatay sumcad badan iyo magac weyn, haddana marna fursad uma waayin ubadkiisa, waxaanu ugu tegi jiray iskuullada sida aabbeyaasha kale.
Previous articleSomalia and China discuss Twain and Somaliland action
Next articleAjaanib laga helay Cudurka Corona virus degaanada Somaliland